musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Nzira Yekufamba NeNew COVID Strain Omicron?
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Zano iri rinouya mazuva maviri mushure mekunge nyika yamutswa nerumwe rudzi rweCoronavirus, inozivikanwa seOmicron, kana kuti nehunyanzvi iyo B.1.1.529 musiyano.
The World Health Organization akange ateterera vatungamiriri venyika kuti vasaite zvemabvi uye akayambira pamusoro pekuiswa kwezvirambidzo zvekufamba pakabuda nhau dzeOmicron.
Izvi zvinonyanya kukuvadza iyo World Tourism Indasitiri panguva iyo mwenje wakajeka wekupora waipenya. Iyo World Travel Market muLondon kana IMEX MuLas Vegas ichangopedza kubudirira. Mafungiro etarisiro akamutsa ndege itsva dzepasi rose, kuvhurwa kwemahotera, uye kukwidziridzwa kwekushanya munyika.
Tarisiro iyi yakaparadzwa mukati memaawa mazuva maviri chete apfuura apo nyika dzeEurope dzakabva dzatanga kumisa kufamba kuenda kuSouthern Africa. Izvi zvakateverwa nekurambidzwa kufamba kweUS kwakatungamirwa neMutungamiri Biden.
Maererano nepepanhau rakabudiswa ne Bazi reSouth Africa rekudyidzana nedzimwe nyika, rudzi rutsva urwu rwakatanga kuonekwa muBotswana, rwechipiri muSouth Africa.
Yakatofamba kuenda kuGermany, Netherlands, Hong Kong, yakaunzwa nevafambi vari mundege dzepasi rose. Hutachiona uhu mukati mezuva rimwe chete haisisiri nyaya iri yoga yekuSouth Africa.
Kunyangwe nyika dzinosanganisira United Kingdom dzakaita mukati memaawa mukuvhara miganhu, kumisa ndege pakati peUK neSouth Africa, hazvina kukwanisa kumisa hutachiona uhu kuti huyambukire pasirese. Yakanga yatova muEurope neHong Kong nyika yose isati yatomboziva nezvazvo.
Nyika yeNew York, nyika yeSouth America Colombia yakazivisa hutano hwekukurumidzira zvichienderana nehutachiona hutsva uhu, kunyangwe vachiri nezero kesi.
Aya maitiro ekurambidza kufamba nendege kuenda kuSouthern Africa ave kutsaura Southern Africa, kuvhara indasitiri yayo yekufambisa uye yekushanya. Nhasi chete Qatar uye kunyange Seychelles yakazivisa kuvharwa kwemiganhu nemhepo zvinongedzo.
Saudi Arabia, zvakadaro, ichangozivisa kuti ichabvumira kupinda kune vafambi vanobva kunyika dzese, chero bedzi vawana dosi rimwe chete rekudzivirira kweCCIDID-19. Zvakadaro, Humambo hwakamisa ndege kuenda kuSouth Africa, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, neEswatini.
The Netherlands uye dzimwe nyika dzakawanda dziri kuvharika.
… asi sei?
Anita Mendiratta, chipangamazano weUNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili nezuro akanyora iyi tweet kune mukuru wake, iyo yaakaburitsa paTwitter yake achiti:
Zvakaitika zvakaratidza kuti njodzi-yakavakirwa, nzira yesainzi inzira yekuenda: Kuchengeta vanhu vakachengeteka pasina kucheka mararamiro ekushanya.
Zvirambidzo zvekufamba zvinoshoresa nyika dzese nematunhu, zvinoisa mabasa munjodzi, uye kukuvadza kuvimba. Ndivo nzira yekupedzisira, kwete yekutanga mhinduro.
Zviripachena, chero munhu anoda kufamba, kana kupa masevhisi ekufambisa anofanira kubvumirana nezvakataurwa naZurab kwasara mazuva mashoma kuti UNWTO General Assembly isati yadzimwa muMadrid, asi mazwi akadai haana maoko-pane mhinduro.
Iyo World Tourism Network inoda kupa nzira nyowani, yakavakirwa paunyanzvi hwesainzi, uye chinangwa chekuchengetedza kufamba uye kushanya kushanda.
Kurudziro yeWTN iyi ndeyekuwedzera pakukurudzira kwesangano kuenzana mukuwaniswa kwejekiseni nenyika dzese uye kuda kubayiwa nhomba pakufamba.
Hazvigone kuve kuti kune nhomba yakakwana muUnited States neEurope, ine 30 kana kupfuura muzana yekuramba mwero, nepo kuchingove neavhareji ye7% vanobayiwa munzvimbo dzakawanda dzeAfrica, uye vanhu vari kushuvira kuwana hupenyu huno. -kuchengetedza vaccine.
Dr. Peter Tarlow, purezidhendi WTN
Huwandu hwekudzivirira hushoma nekuda kwekuwanikwa kwejekiseni ichokwadiwo munyika dziri mamaira mashoma kubva kumiganhu yeUS, kusanganisira nyika zhinji dzeCaribbean.
The World Tourism Network iri kukurudzira UNWTO, WHO, WTTC, IATA, hurumende, uye indasitiri yekufambisa kusundira nzira yakati siyanei yekukwira pamusoro pedambudziko. WTN inonzwa kuti nzira iyi haingaparadze indasitiri yakakosha yekufambisa uye yekushanya, uye kubvumira nzira ine tariro yekuti indasitiri iyi ishande uye kubudirira neCOVID-19.
Maitiro akadai anga achishandira dzimwe nyika, kusanganisira Israel.
Pamberi pese nendege yepasirese inoda kukurumidza kuongororwa kwePCR panhandare yendege kana mukati memaawa makumi maviri nemana usati wasimuka, kunyangwe kune avo vakabaiwa zvizere.
Iva nechokwadi chekuti munhu wese ari mundege yekune dzimwe nyika akabaiwa nhomba.
Influenca imhando yeCoronavirus uye kazhinji haigone kusiyaniswa neCCIDID-19, ita kuti zvive zvinosungirwa kuti vafambi vabaiwe mushonga wekudzivirira flue, kunyanya panguva yemwaka weflue.
Yekukurumidza PCR bvunzo inzira nyowani yekuyedza Covid-19 iyo ichangobva kubvumidzwa neFDA. Rapid PCR bvunzo inzira nyowani inonakidza yekuyedza Covid nekuti inosanganisa iko kurongeka kwePCR bvunzo nenguva yekukurumidza kutendeuka yekuyedza nekukurumidza. Iyi bvunzo dzeCovid dzinongotora maminetsi angangosvika gumi nemashanu kupa mhinduro.
Rapid PCR bvunzo isarudzo yakanakira chero munhu anoda mhedzisiro nekukurumidza, senge munhu anoda mibairo yekufamba mukati memaminitsi gumi nemashanu kubva pakubva, kana kuona zviratidzo zveCovid-15.
Rapid PCR bvunzo ndeye nasal swab diagnostics. Vanoshanda nekuona genetic zvinhu zvehutachiona. PCR bvunzo dzinotarisa zvinhu zvinowanikwa mukati mehutachiona pachikamu chemolecular, pane kutsvaga mapuroteni anowanikwa pamusoro pehutachiona, sezvinoita antigen bvunzo.
Iyo Rapid PCR bvunzo inofanirwa kuve yakajairwa mukati memaawa makumi maviri nemana ekufamba kune dzimwe nyika, uye inowanikwa panhandare dzendege kana uchitarisa kune imwe nyika, maererano nendiyo itsva World Tourism Network kurudziro.
Nemaitiro akadai mazwi eUNWTO Secretary-General ekushandisa kurambidzwa kufamba senzira yekupedzisira anove echokwadi.
Pasina iyo, nyika yega yega inodhonza mabhureki ekukurumidzira kuchengetedza vagari vayo. Muzviitiko zvakawanda, izvi zvanyanya kunonoka, kunyangwe kana zvaitwa mukati mezuva rimwe kana maviri, kana pakumirira kunzwisisa kutsva kutsva.
Mutungamiri weWTN Dr. Peter Tarlow anoti:
“Tinofanira kudzidza kubva pamamiriro ezvinhu aya. Hapana nguva yekuvhunduka, tinofanirwa kushandisa pfungwa dzedu, uye kuunza indasitiri iyi, hutano nehurumende papeji imwe chete. "
Iyi nzira inoda kuedza kukuru pamativi ese. Nyika, kusanganisira Saudi Arabia, yanga ichitungamira muIzwi Tourism uye kuisa mari kumashure kwemazano akanaka.
Ino ndiyo nguva yekuisa mari mukushandisa system, ichiita kuti iwanikwe chero pasirese.
Izvi zvinodikanwa, saka isu tese takachengetedzwa, uye kuvimbisa kufamba uye kushanya kunogona kubudirira kunyangwe kana hutano hutsva hune chekuita neCOVID huchibuda.